Bokin'i Josoa - Howling Pixel
Ny hoe Bokin'i Josoa na Bokin'i Jôsoe dia fanagasiana ny anaran'ny boky amin'ny teny hebreo hoe ספר יהושע / Sefer Yehoshua. Ny hoe Yehoshua dia atao amin'ny teny anglisy hoe Joshua ka izany no nakan'ny Baiboly protestanta malagasy ny hoe Josoa fa amin'ny teny frantsay kosa dia Josué ka avy amin'io indray no nakan'ny Baiboly katolika malagasy ny hoe Jôsoe.
Ny amin'ny fanoratana ny Bokin'i Josoa
Ny nanoratana ny boky, araka ny lovantsofina
Ny lovantsofina jiosy dia milaza fa i Josoa (na Jôsoe) no nanoratra io boky io. Nampitondraina ny anaran'i Josoa ilay boky satria izy no olona voaresaka betsaka sady manana ny maha izy azy indrindra ao anatiny. I Josoa dia ilay lehilahy nanampy an'i Mosesy (na Môizy) tamin'ny fitarihana ny Zanak'i Israely avy any Ejipta hankany amin'ny tany Kanana sady lasa mpitarika an'io vahoaka io taorian'ny nahafatesan'i Mosesy.
Ny fanoratana ny boky, araka ny fikarohana ankehitriny
Ny sasany amin'ny mpikaroka momba ny Baiboly dia milaza fa fitambaran-tsoratr'olona samihafa sady avy amina loharano samihafa ny Bokin'i Josoa. Toy izao ny fisehon'izany ara-potoana:
Fanoratana voalohany izay ahitana indrindra ny toko voalohany hatramin'ny toko faha-12 tamin'ny taonjato faha-7 tal. J.K., tamin'ny andron'ny mpanjaka Josia.
Fanampiana lahatsoratra deoteronomista tamin'ny taonjato faha-6 sy faha-5 tal. J.K.
Fanampiana lahatsoratra momba ny asan'ny mpisorona indrindraindrindra tamin'ny taonjato faha-5 sy faha-4 tal. J.K. (Toko 3-5; 20-22; 24).
Fanampiana lahatsoratra samihafa tamin'ny taonjato faha-2 tal. J.K.
Ny fizaràna ny boky
Azo zaraina roa na telo ny Bokin'i Josoa, ka ny fizaràna voalohany dia mahafaoka ny toko voalohany hatramin'ny toko faha-12.
Ny fizaràna faharoa dia manomboka eo amin'ny toko faha-13 hatramin'ny toko faha-21. Ny fizarana fahatelo dia manomboka eo amin'ny toko faha-22. Raha fizaràna roa fotsiny no atao dia manomboka amin'ny toko faha-13 ka miafara amin'ny toko faha-24 ny fizaràna faharoa. Misy koa ny mizara ny boky ho efatra na mihoatra aza.
Ny nahazoan'ny Zanak'i Israely ny tany Kanana (Jos. 1 - 12)
Ny fizaràna voalohany izay mitantara ny nahazoan'ny Zanak'i Israely ny tany nampanantenain'Andriamanitra azy, dia ny tany Kanana. Betsaka ireo tanàna azon'ny Israelita noho ny fanampian'Andriamanitra azy ka ny sasany amin'izany dia azo tamin'ny fomba mahagaga. Ohatra amin'izany ny nandrodanana ny mandan'i Jeriko (na Jerikao) tamin'ny alalan'ny fitsofana trompetra, ny nampijanonan'Andriamanitra ny masoandro sy ny volana mba hanohizan'ny Israelita ny ady ka handreseny, ny nandatsahan'Andriamanitra havandra handripaka ny miaramilan'ireo firenena fahavalo, sns. Io fizaràna io ihany koa no maneho fa tsy manampy ny Zanak'i Israely Andriamanitra rehefa tsy manaja ny Fanekem-pihavanana izy ireo. Izany, ohatra, no naharesy azy tamin'ny ady nataony tao Ay (na Hay) (Jos. 7.1-12).
Ny fizaràna ny tany tamin'ireo fokon'i Israely (Jos. 13 - 21)
Amin'ity fizaràna ity no ilazana ny foko roa ambin'ny folo sy ny antsipiriany momba ny anjara tany nomena azy ireo tsirairay. Nisy ny foko izay efa nahazo ny anjarany tamin'i Mosesy (na Môizy) talohan'ny nidirana tao Kanana. Ambara ao koa ny fomba nizarana ny tany, dia ny fanaovana antsapaka. Nisy koa ny fanokanana tanàna fialokalofan'izay nahafaty olona tsy nahy. Ny Levita ihany no tsy nahazo anjara tany manokana fa nomena tanàna ao amin'ny foko hafa rehetra.
Ny hafatra farany nataon'i Josoa (Jos. 21 - 24)
Efa antitra i Josoa tamin'ny nahavitana ny fakàna sy ny fizaràna ny tany Kanana ka nanao hafatra farany ny amin'ny tsy tokony hakan'ny Zanak'i Israely tahaka ny fanaon'ireo firenena manodidina azy, ny tsy hifangaroany aminy, ny tokony hitandremany ny lalàna ary ny fampahatsiahivany ny halehiben'ny herin'Andriamanitra sy ny fanatanterahany ireo fampanantenana izay nataon'Andriamanitra. Nilaza koa i Josoa fa raha misaraka amin'Andriamanitra ny Israelita ka manompo andriamani-kafa dia ho tonga ireo firenena manodidina ka handripaka azy. Nitady ny valin-tenin'ireo Israelita i Josoa ho fanamafisana ilay Fanekem-pihavanana eo amin'Andriamanitra sy ny Zanak'i Israely. Nilaza iretsy farany fa hanompo an'Andriamanitra.
I Filistia dia fanjakana naorin'ny Filistina, izay isan'ireo atao hoe "Vahoakan'ny ranomasina", manodidina ny taona 1200 tal. J.K. tao amin'ny morontsiraky ny Ranomasina Mediteranea manodidina ny tananan'i Gaza sy Askelona. Fikambanan-tanàna mahaleo tena ara-politika i Filistia tamin'ny voalohany, avy eo nanjary fanjaka-mpanjaka tamin'ny taonjato faha-11 tal. J.K. Niady tamin'ny Fanjakan'i Israely matetika i Filistia. Atao hoe פלשת / Pleshet i Filistia amin'ny teny hebreo.
Ny sisin-taniny ao avaratra dia ny ony Iarkona, ny ao andrefana dia ny Ranomasina Mediteranea, i Joda no ao atsinanana ary i Wadu El-Arish ny ao atsimo. Tanàn-dehibe dimy, izay samy manana ny tompo mpanampaka azy avy, no mitambatra ka niteraka an'i Filistia, dia i Askelona, i Asdoda, i Ekroa, i Gata ary i Gaza ao amin'ny amin'ny tapany atsimo andrefan'ny Atsinanana Akaiky. Ao amin'ny Bokin'i Josoa (Jos. 13.3) ao amin'ny Boky voalohan'i Samoela (1Sam. 6.17) no miresaka izany.
Ireo mpanapaka dimy ny Filistina ireo dia resahina ao amin'ny Baiboly hebreo fa nifanerasera sy niady matetika amin'ireo Israelita mpifanolo-bodirindrina aminy sy ny Kananita ary ny Egiptiana.
Tsy voaresaka ny amin'ny Filistina taorian'ny famaboan'ny Empira asiriana vaovao ny faritry ny Atsinanana Akaiky (taona 911 - 605 tal. J.K.). Hatramin'izao dia mbola iadian'ireo mpahay tantara hevitra ny fiavian'ny Filistina na avy amin'i Kanaana Taloha na mpifindra monina avy any Afrika Avaratra, avy any Anatolia na avy any Kreta.
Ny fokon'i Jodà dia iray amin'ireo foko roa ambin'ny folon'i Israely.
I Galilea na Galilia dia faritra ao amin'ny tapany avaratr'i Israely, izay eo anelanelan'ny Ranomasina Mediteranea ao andrefana sy i Siria ao avaratra ary ny lemak'i Esdrelona ao atsimo.
I Josoa na Josoe na Jôsoe dia ilay lehilahy nanampy an'i Mosesy (na Môizy) tamin'ny fitarihana ny Zanak'i Israely avy any Ejipta hankany amin'ny tany Kanana sady lasa mpitarika an'io vahoaka io taorian'ny nahafatesan'i Mosesy. Izy no ataon'ny lovantsofina jiosy sy kristiana ho nanoratra ny Bokin'i Josoa.
I Otniela na Hôtniela dia mpitsara israelita. Isan'ireo atao hoe mpitsara lehibe izy. Otniel Ben Knaz (עתניאל בן קנז) no anarany feno amin'ny teny hebreo, izay azo gasina hoe Otniela zanak'i Kenaza. (Mpit. 3.8-11). Mety hidika hoe "Heriko Andriamanitra" na "Namonjy ahy Andriamanitra" ny hevir'i anarana io. I Kosama-Riseataima, mpanjakan'i Arama no nifanandrina taminy. Tamin'ny androny dia nandry fehizay tanatin'ny 40 taona i Israely. Izy no mpitsara voalohany tao Israely ary i Ehoda no nandimby azy.
Isan'ny fokon'i Joda izy ary i Kenaza izay zandrin'i Kaleba no rainy. Izy no mpitsara voalohany nandimby an'i Josoa (na Josoe). Ao amin'ny Bokin'i Josoa sy ny Bokin'ny Mpitsara (Mpits. 1 sy 3) no ahitana ny tantarany.
Nandresy an'i Hebrona teo akaikin'i Beni-Anaka i Kaleba tao atsimo, izay avy amin'ny fokon'i Joda. Naka ny tananàna Kiriata-Seferay ny zana-drahalahiny atao hoe Otniela, zanak'i Kenaza. Izy koa dia niady amin'ny Edômita. Niditra tao amin'ny tany Kanana i Kosama-Riseataima, mpanjaka avy any amin'ny faritr'i Eofrata, mba hanafika sy haka koa an'i Ejipta. Resin'i Farao anefa izy ka nanao taridositra nitondra ny tafika sady nandroba ny firenena izay nolalovany. Nahangona tafika i Otniela ka afaka nanenjika sy nandroaka azy.